Tips for Dating Isitshayina Abafazi Dating Iincam
Dating a Isitshayina umfazi kufuneka lisetyenziswe ngokwahlukileyo kunokuba dating umfazi ukusuka Kwintshona inkcubeko. Okulindelweyo kwi-budlelwane nabanye ngabo uphezulwana kakhulu kwi-Isitshayina inkcubeko kwaye bamele ithathwe ngakumbi seriously ukususela outset. Ukwenza ilungelo lokuqala impression ngu incredibly kubalulekile ukuba ufuna ukuya ngaphandle kumhla nge Isitshayina umfazi.
Kwi-Isitshayina inkcubeko kulindeleke ukuba umntu uza kuthatha eli phulo kwaye ucele umfazi kumhla. Ukuba wenza buza kuba umhla, qiniseka ukuba usebenzisa polite kwaye bonisa kwayo ngokubhekiselele. Kanye kwi-umhla kulindeleke ukuba umntu oza kuhlawula nokuba kungasiphi na umsebenzi yi-esikhethiweyo. Qiniseka ukuba wena musa thetha kakhulu kakhulu kwi-umhla. Buza imibuzo yakhe malunga herself kwaye ngenene mamela yakhe iimpendulo. Isitshayina abafazi silindele ukuba hlonipha iingcinga nemvakalelo kwaye musa na umntu othe ithetha kakhulu kakhulu okanye boastful. A Isitshayina umfazi abe ikhangela a iqabane lakho emtshatweni kwaye kungathatha dating iselwa seriously, kodwa yena babe kanjalo nje kuqwalasela kuba umntu yokuchitha abanye ixesha kunye. Xoxa kakhulu phambi kwexesha ngomhla into ofuna kwaye yakho hopes kuba kwixesha elizayo. Ukuba osikhangelayo isinye-busuku kuma okanye ngokukhawuleza fling, unoxanduva mhlawumbi dating ezingachanekanga umntu. Ukuba ufaka seriously anomdla yakhe kwaye ufuna ukufumana ukwazi yakhe ngcono, zibalisa wakhe lowo. Kubalulekile kusenokwenzeka ukuba yena uza ufuna ukwenza efanayo. Isitshayina abafazi ayisayi necessarily kuthetha ntoni ngabo ndinovelwano. Maninzi ngaphezulu sifuna kubonisa njani baye bazive malunga nawe ngomsebenzi wabo iintshukumo. Isitshayina nabafazi babe jonga emva kokuba ugqibe nge-ukuthenga izinto okanye ufuna ukwenza okulungileyo ukutya. Babe uncedo ukhetha i-outfit kwaye kukunceda ukuba bakhangele okulungileyo, okanye baya jonga emva kwenu ukuba ufaka abagulayo. Le yindlela baya zichaziwe zabo affection njengoko babe kakhulu ukuba neentloni ukuba zichaziwe zabo nzulu nemvakalelo. Xa yena iyathemba kuwe ngokupheleleyo, yena ndiya kukuxelela indlela yena uziva ngathi usasebenzisa. Ukuba unayo zilawulwe ukufumana kude ngokwaneleyo kuba umfazi ucinga ukuba uphelelwe ezinzima, kuza kufuneka ahlangane yena nosapho lwakhe. Ukuvunywa wakhe usapho iya kuba obaluleke kakhulu, kwaye kufuneka uzame ukwenza eyona impression uyakwazi. Kuzisa isipho kodwa lumka njengoko izipho kuba kakhulu amakhonkco meanings kwi-China kwaye ezingachanekanga isipho ayikwazi ukubeka kuwe ngendlela embi kakhulu ukukhanya. Eyona isipho izakuba into eyodwa kwaye creative ukuba babeya kuba anomdla. Ukuba babe ngathi emidlalo kwaye impilo, yokuzithenga ezikhethekileyo impilo ukutya.
Eyona nto yenza ukuba undibuze girlfriend benza ntoni ungathanda
Xa intlanganiso abazali kuba ngokwakho, kuba honest kwaye kuba respectful.
Khumbula ukuba abazali nje ufuna eyona kuba umntwana wabo
Zoe Van-de-Velde waqalisa ukufunda kwaye kunegalelo ukuba EHow kwaye Impendulo bag. Van-de-Velde ubani Imfundo ka-Lobugcisa Humanities kwi media kwaye isixhosa ukusuka DE Montfort Ngezifundo. Yena ngoku studying kuba Master of Lobugcisa kwi-creative media lobugcisa specializing kwi-digital photography e-London Afrika Bank Ngezifundo
← Guangzhou, China Apho Omnye Girls Omnye Mans Ukuhamba